Fifanaovam-beloma tamin'i zoky Suzelin Ratohiarijaona mivady. | Malagasy eto Italia
Fifanaovam-beloma tamin'i zoky Suzelin Ratohiarijaona mivady.
Nampidirin'i Rondro ny Mon, 13/12/2021 - 06:43
Tsy hay ny tsy haneho fisaorana feno fankatelemana antsika rehetra vory lanona anio niara-nisaotra an’i zoky Suzelin mivady tamin’izay rehetra vitany ho antsika zanak’i Madagasikara am-pielezana atý Italia ary nanolotra ny veloma mandram-pihaona ho azy ireo amin’izao zareo hitodi-doha an-tanindrazana izao rehefa nahavita ny adidy nampiandraiketina azy teto. Na tsy afaka tonga aza aho fa mbola anatin’ny gripa be dia faly tokoa naheno ny akony fa afa-po daholo isika rehetra.
Misaotra an'i Hervé Donatien, Sandra Minah, Murio ary Hasina ihany koa nizara ireo sary sy horonana nalain'izy ireo.